प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकै भाइको घरमा चोरी, के के लग्यो चोरले? - Khabar Nepali
होमपेज / समाचार / प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकै भाइको घरमा चोरी, के के लग्यो चोरले?
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकै भाइको घरमा चोरी, के के लग्यो चोरले?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै भाइको घरमा चोरी भएको छ । चोरले धेरै सम्पति भएको अनुमान गरेर प्रधानमन्त्री देउवाकै भाईको घरमा आँखा लगाएको हो । उनको कैलालीको धनगढीस्थित घरमा चोरी भएको हो । धनगढी उपमहानगपालिका वडा नम्बर २ सन्तोषीटोलका स्थानीय भरतबहादुर देउवाको घरमा चोरी भएको हो ।
देउवाले चार हजार नगदसहित करीब तीन तोला सुन र तीन तोला चाँदी चोरी भएको बताए । उनले भने, ‘ढोकामा ताल्चा लगाएर नजिकै रहेको आफन्तकोमा टीका लगाउन गएका थियौँ। ताल्चा रडले खोलिएको छ। सबै दराज खोलेर नगदसहित तीन तोला सुन र तीन तोला चाँदी लगिएको चोरी भएको छ।’ भरत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भाइ हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले पनि गहना चोरी भएको जानकारी दिए । ‘छिमेकी आफन्तको घरमा दसैंको टीका लगाउन गएको समयमा २० मिनेट घर खाली भएको रहेछ,’ एसपी अधिकारीले दिनेशखबरलाई भने, ‘सोही २० मिनेटको अवधिमा चोरी भएको हो। खोजीका लागि प्रहरी परिचालन भइसकेको छ।’
दसै‌को समयमा चोरीका घटना बढ्ने गरेका छन् । प्रहरीले सकभर घर खाली नछोड्न र छोड्नै परे त्यसको जानकारी सामाजिक स‌जालबाट नदिन अनुरोध गरेको छ ।
यिनै हुन् १७ बर्षका ७१ सेमी उचाई रहेका खपाङी, विश्वकै जीवित हाेचामा तेस्राे हुन सक्ने दाबी
बागलुङमा आतंक! एकै पटक ८ कार्यालय र १९ घरमा चोरी
भरतपुरमा बोलेरोले स्कुटरलाई ठ’क्क’र दिँदा एक शिक्षिकाको मृत्यु
बाजुराको बूढीगङ्गामा ज्वरोका बिरामी बढे, कारण यस्तो
यिनै हुन् कराते खेलाडी पाइजा जस्ले घरमा आएको जिउँदो चितुवालाई नियन्त्रणमा लिए